Igbo Mass Readings for Wednesday after Epiphany (Wednezde na-eso Epifani) | Catholic Lectionary
Chineke, Onye bu ihè mba niile, nye anyi anuri nke udo di ebighi ebi, ma tinyekwa n’ime anyi ihè Gi dika I siri tinyekwa n’obi ndi nna-nna anyi ha. Site na Dinwenu anyi Jesu Kristi …
Ihe Ogugu nke mbu: 4:11-18
Ihe ogugu ewetara n’Akwukwoozi mbu nke Jon:
Ndi m huru n’anya, ebe o bu na Chineke huru anyi n’anya otu a, anyi kwesikwara ihurita onwe anyi n’anya. O nwebeghi onye hurula Chineke. O buru na anyi hurita onwe anyi n’anya, Chineke na-anogide n’ime anyi, ma na-emekwa ka įhunaanya ya zuo oke n’ime anyi. Otu a ka anyi ga-esi mara na anyi bi n’ime ya, ya onwe ya ebiri n’ime anyi n’ihi na o nyela anyi Mmuo ya. Anyi ahula, na-agbakwa akaebe na Nna ezitela Nwa ya ka o buru onye nzoputa nke uwa.
Onye obula na-ekwuputa na Jesu bu Nwa Chineke, Chineke na-ebi n’ime ya, ya onwe ya na-ebikwa n’ime Chineke. Anyi maara, ma kwerekwa n’ihunaanya Chineke nwere n’ebe anyi no. Chineke bu ihunaanya, onye obula na anogide n’ihunaanya na-anogide na Chineke, Chineke na-anogidekwa n’ime ya. Otu a ka e si mee ka ihunaanya zuo oke n’ebe anyi no, na anyi ga-enwe obi siri ike n’ubochi ikpe ahu, n’ihi na otu o di, ka anyi onwe anyi dikwa n’uwaa. Ujo adighi n’ihunaanya. Ihunaanya zuru oke na achupu egwu. N’ihina ujo na ntaramaahuhu na agako. Onye obula na-atu egwu, ezubeghi oke n’ihuaanya.
ABUOMA NA AZIZA: Ps: 72:1-2, 10, 12-13.
Aziza: Onyenweanyi mba niile di n’uwa ga esekpuru gi.
Nye eze ikpe nkwumoto gi O Chineke,
nyekwa nwa eze eziomume nke gi,
Ka o were nwee ike ichi ndi nke gi n’uzo ziri ezi,
nyekwa ndi ogbenye ikpe ziri ezi. Az./
Eze ndi Tashish na eze obodo mmiri gbara gburugburu ga-efe ya.
Eze ndi Sheba na Seba ga-enye ya onyinye. Az./
na ndi niile choro enyemaka ya.
O ga- emere ndi ogbenye na ndi esighi ike ebere,
na azokwa ndu ndi no na mkpa. Az./
Mgbe puku mmadu ise ahu rijuchara afo, ngwangwa Jesu mere ka ndi na-eso uzo ya banye n’ugbo mmiri, buru ya uzo kwofee n’ofe nke ozo nke osimiri Betsaida, ma ya onwe ya noduru izila igwe mmadu ahu. Mgbe o hapuru ha o gara n’elu ugwu ikpe ekpere. N’oge uhuruchi ndi na-eso uzo ya no n’ugbu mmiri n’etiti osimiri, ma Jesu no n’ala naani ya. Mgbe o huru na ndi na-eso uzo ya na-adogbu onwe ha n’inya ugbo n’ihi na ifufe na efegide ha. N’ihe dika elekere ano nke ututu o biakwutere ha, na-aga ije n’elu mmiri. O wee choo igafe ha, ma mgbe ha huru ya ka o na-aga ije n’elu mmiri, ha chere na o bu mmuo, wee tie mkpu. Ha niile huru ya, obi wee fepu ha. Ma ngwa-ngwa Jesu siri ha, “Obi sie unu ike, o bu m, unu atula ujo!” O wee banyekwuru ha n’ugbo mmiri, ifufe wee kwusi.
Ihe ndi a gbagwojuru ndi na-eso uzo ya anya. N’ihi na ha aghotaghi ihe banyere ogbe achicha ise ahu o ji zuo igwe mmadu maka na obi ha kpo chiri akpochi.
Nna nke udo, nabata nnyefe anyi nyefere onwe anyi n’idi nso yana n’obi ocha anyį, site na nketa oke anyi na-eketa n’ihe omimi nke a, mee ka anyi na-abi a mmadu ibe anyi nakwa Gi onwe Gi nso. Anyi na-ario Gi ihe ndia site na Kristi Dinwenu anyį. Amen.
Dinwenu, ka Sacramenti nke a buru ike anyi. Kuziere anyį ka anyi na-aghota uru iheoma niile I nyere anyi, bia nyere anyi aka įdi na-agba mbo maka ndu ebighi ebi. Anyi na-ario ihe ndia site na Kristi Dinwenu anyį. Amen.